Diclofenac vs. ibuprofen: ကွာခြားချက်များ၊ တူညီခြင်းနှင့်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, သတင်း နှိပ်ပါ ကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း သတင်း၊
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Diclofenac vs. ibuprofen: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Diclofenac vs. ibuprofen: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာအတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းများစွာရှိသောကြောင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အဆစ်နာခြင်းဖြင့်ပုံမှန်နာကျင်မှုခံစားရပါက diclofenac သို့မဟုတ် ibuprofen ကဲ့သို့သော nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေး (NSAID) ကိုသင့်အားအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဤဆေးများသည် prostaglandins ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။
Diclofenac နှင့် ibuprofen တို့ကိုရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုများကိုကုသနိုင်သည့် NSAIDs များကိုသာအသုံးပြုလေ့ရှိသည် အရိုးပွရောဂါ နှင့်အဆစ်အဆစ်။ ဤဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည် NSAIDs များမဟုတ်သောကြောင့် Prostaglandin ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသော COX-2 နှင့် COX-1 အင်ဇိုင်းများကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် COX-1 အင်ဇိုင်းသည်အစာအိမ်၏နံရံပေါ်တွင်အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်၎င်းအင်ဇိုင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
diclofenac နဲ့ ibuprofen တို့ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
Diclofenac (diclofenac ကူပွန်) သည် Voltaren အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ဆေးညွန်းသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ကျောရိုးကိုထိခိုက်သောအရိုးအဆစ်ရောင်နာ (ankylosing spondylitis) တို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောယေဘုယျဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Diclofenac ဆိုဒီယမ်သည်နှောင့်နှေးသောတက်ဘလက်၊ တိုးချဲ့ထားသောတက်ဘလက်နှင့်လိမ်းသည့်ဂျယ်လ်သို့မဟုတ်အရောအနှောအဖြစ်ပါလာသည်။ FDA သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။
Ibuprofen (ibuprofen ကူပွန်) သည်များသောအားဖြင့်လူကြိုက်များသော NSAID ဖြစ်သည် (OTC) သို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ Ibuprofen ကို၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Advil or Motrin ဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ OTC ibuprofen ကိုပျော့ပျောင်းသောနာကျင်မှုနှင့်အဖျားအနာများတွင်သုံးနိုင်ပြီးဆေးကြောထားသောဆေးစွမ်းအားမှာ ibuprofen ကိုရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာမှပြင်းထန်သောနာကျင်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၆ လနှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များတွင်နာကျင်မှုကိုကုသရန် FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
diclofenac နှင့် ibuprofen အကြားအဓိကကွာခြားချက်များ
မူးယစ်ဆေးအတန်း Nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး (NSAID) Nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး (NSAID)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ယေဘုယျအဆင့်အတန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ရရှိနိုင်ယေဘုယျ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ရရှိနိုင်ယေဘုယျ
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ ခံတွင်းတက်ဘလက်, အူမပါသည့်ပါးစပ် tablet, တိုးချဲ့ဖြန့်ချိ
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? တစ်နေ့လျှင် 50 မှ mg မှနှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ် ခြောက်မှရှစ်နာရီလျှင် 400 မှ 800 မီလီဂရမ်
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ နေ့စဉ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် ၁၀ ရက်ထက်မပိုရသို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အရွယ်ရောက်သူ အရွယ်ရောက်သူ
Diclofenac စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
diclofenac နှင့် ibuprofen မှကုသသောအခြေအနေများ
Diclofenac (diclofenac ဆိုတာဘာလဲ။ ) သည် osteoarthritis, rhumatoid arthritis နှင့် ankylosing spondylitis ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းနှင့်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းမှနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသက်သာစေသည်။ Ibuprofen (ibuprofen ဆိုတာဘာလဲ?) သည် osteoarthritis, rematric arthritis နှင့် ankylosing spondylitis တို့ကိုလည်းကုသနိုင်သည်။ NSAID နာကျင်ကိုက်ခဲစေသောဆေးတစ်မျိုးအနေဖြင့် ibuprofen သည် dysmenorrhea နှင့် migraines များကိုဆေးညွှန်းမပါသောဆေးများဖြင့်လည်းနာကျင်ခြင်းနှင့်အဖျားအနာကိုကုသနိုင်သည်။
အခြေအနေ Diclofenac Ibuprofen
အရိုးပွရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
spondylitis Ankylosing ဟုတ်တယ် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
Dysmenorrhea ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
diclofenac သို့မဟုတ် ibuprofen သည်ပိုမိုထိရောက်ပါသလား။
Diclofenac သည်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံမှဆေးညွှန်းလိုအပ်ပြီး ibuprofen ထက်ပိုမိုထိရောက်သည့် NSAID ဖြစ်သည်။ ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာအတွက် diclofenac ကိုနေ့စဉ် ၁၅၀ မီလီဂရမ်မှ ၂၅ မှ ၅၀ မီလီဂရမ်အထိထိုးပေးလေ့ရှိသည်။ Ibuprofen ကို 800 mg ထက်ပိုသောဆေးများဖြင့်နေ့စဉ်ဆေးပမာဏမှ 3200 mg အထိသတ်မှတ်သည်။
တစ် ဦး အတွက် meta-analysis သည် Arthritis Research and Therapy ဂျာနယ်မှ diclofenac သည်အဆစ်နာနာကျင်မှုသက်သာစေရန် ibuprofen ထက်ပိုမိုထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လူနာ ၁၄၆,၅၂၄ ယောက်နှင့်လေ့လာမှု ၁၇၆ ခုမှလေ့လာမှုကိုဤလေ့လာမှုကသုံးသပ်ခဲ့သည်။ အစာအိမ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သက်ရောက်မှုများမှာ diclofenac နှင့် ibuprofen တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်ကျသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ Diclofenac သည် celecoxib နှင့်အခြား NSAIDs များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် နာတာရှည် ။
diclofenac နှင့် ibuprofen တို့ကိုသင့်လျော်သောဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်စေရန်သင်၏ကုသမှုနည်းလမ်းများကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ibuprofen စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up ပြုလုပ်ပြီးစျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည်ကိုရှာဖွေပါ။
diclofenac နှင့် ibuprofen တို့၏ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်အများစုသည် diclofenac ၏ယေဘူယျဗားရှင်းကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ diclofenac ၏ပျမ်းမျှလက်လီဈေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၆၀ ခန့်ရှိသည်။ ဤကုန်ကျစရိတ်ကို SingleCare ကူပွန်ကဒ်ဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၀ မှ ၃၀ အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
ယေဘူယျ ibuprofen အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုများသောအားဖြင့်ဆေးဝါးနှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုတွင်အကျုံးဝင်သည်။ အာမခံမရှိလျှင်ပျှမ်းမျှလက်လီကုန်ကျစရိတ်သည်တစ်ပုလင်းလျှင် ၃ ဒေါ်လာမှ ၇ ဒေါ်လာအထိရှိသည်။ သို့သော် ibuprofen ကူပွန်နှင့်စျေးနှုန်းမှာ ၃ ဒေါ်လာအထိကျနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare ဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
စံသောက်သုံးသော 50 မီလီဂရမ် 400-800 မီလီဂရမ်
ပုံမှန် Medicare copay $ 3- $ 46 $ 0- $ 22
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 20-30 $ 3
diclofenac နှင့် ibuprofen တို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
diclofenac နှင့် ibuprofen တို့၏အဖြစ်များသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ အူမကြီးခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့၊ အစာအိမ်နာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြွက်တက်ခြင်း၊ ၎င်းဆေးဝါးများသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးခေါင်းမူးခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်အခွံ (ယားယံခြင်း) နှင့်ဖောရောင် (လက်၊ လက်မောင်း၊ ခြေထောက်များသို့မဟုတ်ခြေထောက်များရောင်ခြင်း) တို့ပါဝင်သည်။
ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများမှာအစာအိမ်အနာနှင့်ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ်အသည်းပြproblemsနာများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်၎င်းတို့တွင်သမိုင်းရှိပါကသို့မဟုတ် NSAIDs နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောအခြားဆေးဝါးများသောက်သုံးပါကဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဝမ်းလျှောခြင်း ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
အစာ ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
ဝမ်းရောဂါ ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
အစာအိမ်ကြွက်တက် ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
ပူလောင်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၃% -9%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၃% -9%
အော့ ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၃% -9%
ယားယံခြင်း ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
Edema ဟုတ်တယ် ၁% -10% ဟုတ်တယ် ၁% -3%
ရင်းမြစ် - DailyMed ( Diclofenac ), DailyMed ( Ibuprofen )
Diclofenac နှင့် ibuprofen တို့သည် NSAIDs ဖြစ်ပြီး angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin receptor blockers (ARBs), beta blockers နှင့် diuretics ကဲ့သို့သောသွေးဖိအားဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ NSAIDs များသည်ဤသွေးဖိအားလျော့နည်းစေသောဆေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
NSAID ဆေးများကို Aspirin သို့မဟုတ် Warfarin ကဲ့သို့သောဆေးရည်များသောက်သုံးခြင်းသည်သွေးယိုစီးမှုအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ ဤဆေးများသည်အစာအိမ်အနာ၏အန္တရာယ်ကိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ NSAID ဆေးများကို SSRI ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
NSAIDs များသည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ၎င်းတို့၏အဆင့်များကိုတိုးပွားစေသည်။ NSAID ဆေးများကို lithium, digoxin နှင့် methotrexate ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတိုးပွားစေနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Diclofenac Ibuprofen
Aspirin Antiplatelet ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Warfarin Antikoagulant ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ဖluoxetine ရွေးချယ် serotonin ပြန်လည်အပ်နှံ inhibitor (SSRI) စိတ်ကျရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Desvenlafaxine Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) စိတ်ကျဆေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Benazepril Angiotensin-converting အင်ဇိုင်း (ACE) inhibitors ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ပန်းချီဆရာ Angiotensin receptor blockers (ARBs) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Atenolol Beta-blockers ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Furosemide Diuretics ဆီး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
လီသီယမ် စိတ်ခံစားမှုတည်ငြိမ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Methotrexate Antimetabolite ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Digoxin နှလုံး glycoside ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
diclofenac နှင့် ibuprofen တို့၏သတိပေးချက်များ
NSAIDs ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ NSAIDs များသည်နှလုံးရောဂါကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်သွေးပေါင်ချိန်ဆေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ NSAID များသည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များစသည့်သွေးထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အစာအိမ်နှင့်အူအတွင်းအနာများမြင့်တက်နိုင်သည်။
အသည်းသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိသူများတွင် Diclofenac နှင့် ibuprofen တို့ကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ NSAID ဆေးများသောက်ခြင်းသည်အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်အဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးစေနိုင်သည်။
NSAID များကိုကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းတွင်မသုံးသင့်ပါ။ ရက်သတ္တပတ် ၃၀ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် NSAID ဆေးများသောက်ခြင်းသည်သန္ဓေသား၏နှလုံးအတွင်းရှိသွေးကြော ductus arteriosus ကိုအချိန်မတန်မီပိတ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်အန္တရာယ်များထက်ကျော်လွန်မှသာကိုယ်ဝန်ဆောင်အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ NSAID များအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။
diclofenac vs. ibuprofen နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Diclofenac သည်လူကြီးများတွင်ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာကုသရန်အသုံးပြုသော NSAID ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအရိုးပွရောဂါ, အဆစ်အဆစ်နှင့် ankylosing spondylitis များအတွက်အတည်ပြု FDA ကဖြစ်ပါတယ်။ Diclofenac သည်မကြာခဏဆေးညွှန်းခံတွင်းပါးလွှာသည့် tablet သို့မဟုတ်လိမ်းဆေးဂျယ်လ်အဖြစ်လာပြီးတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အသုံးပြုသည်။
Ibuprofen သည်အဆစ်မှနာကျင်မှုနှင့်ရောင်ခြင်းတို့ကိုကုသရန်အသုံးပြုသော NSAID ဖြစ်သည်။ လူကြီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များတွင်နာကျင်မှုနှင့်ဖျားနာမှုများကိုကုသရန်အတွက်ဆေးဝါးများမှတဆင့်ရနိုင်သည်။ ဆေးညွှန်းစွမ်းအား Ibuprofen ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ၆ နာရီမှ ၈ နာရီတိုင်းသောက်ပါသည်။
diclofenac နဲ့ ibuprofen အတူတူလား။
မဟုတ်ပါ၊ diclofenac နှင့် ibuprofen တို့သည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ Diclofenac သည် NSAID ဆေးညွှန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ibuprofen ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်း။ သော်လည်းကောင်း၊ Diclofenac ကိုအရွယ်ရောက်သူများအတွက်သာသတ်မှတ်ထားပြီး ibuprofen ကိုကလေးများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
diclofenac vs. ibuprofen ပိုကောင်းသလား။
Diclofenac ကို Ibuprofen ထက် ပိုမို၍ အစွမ်းထက်သည်ဟုယူဆပြီးတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်သောက်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာမှနာကျင်မှုကိုကုသရန် Ibuprofen ကိုမကြာခဏသောက်သုံးသင့်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း diclofenac နှင့် ibuprofen ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် diclofenac နှင့် ibuprofen ကဲ့သို့သော NSAID များကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ NSAID ဆေးများကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းယူခြင်းသည်သန္ဓေသား၏နှလုံးပြproblemsနာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ငါအရက်နှင့် diclofenac vs. ibuprofen ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
Diclofenac နှင့် ibuprofen တို့ကိုအရက်ဖြင့်ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ NSAIDs ဖြင့်အရက်ယမကာသောက်ခြင်းသည်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
နောက်ကျောနာကျင်မှုအတွက် diclofenac သည် Ibuprofen ထက်ပိုကောင်းပါသလား။
Diclofenac သည်ကျောရိုးကိုထိခိုက်သောအဆစ်များအတွက် FDA ကအတည်ပြုသည်။ ၎င်းသည် ibuprofen နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်ဆေးများထက်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ Diclofenac နှင့် ibuprofen တို့သည် NSAIDs အများစုနည်းတူနာကျင်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ရောင်ခြင်းကိုကူညီနိုင်သည်။
diclofenac သည် ibuprofen ထက် ပို၍ လုံခြုံမှုရှိပါသလား။
Diclofenac သည်ဆရာဝန်၏စစ်ဆေးမှုနှင့်ဆေးညွှန်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ Ibuprofen သည်တန်ပြန်ကျော်။ နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အဖျားစသည့်ယေဘုယျရောဂါများအတွက်ပိုမိုလုံခြုံသည်ဟုယူဆပါသည်။
ငါ diclofenac နဲ့ ibuprofen ယူလို့ရမလား။
Diclofenac နှင့် ibuprofen တို့ကိုအတူတူအလုပ်လုပ်သောကြောင့်အတူတူမသောက်သင့်ပါ။ သူတို့ကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
အသဲဆီအသည်းအစားအစာ - စားရန် ၈ ခုနှင့်ရှောင်ရန် ၈
Nucynta vs. oxycodone: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
အိပ်စက်ခြင်းအတွက်မယ်လတိုနင် (Melatonin) ၏အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လည်ချောင်းနာရန် z pak ကိုသင်ယူနိုင်သလား
meth အတွက်မှားယွင်းသော positive positive test ကိုဖြစ်စေနိုင်သောအရာကဘာလဲ